Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Heersare ah oo Kadhacay Xafiiska Jaaliyada S.Ogadenya ee Denmark
Kulan Heersare ah oo Kadhacay Xafiiska Jaaliyada S.Ogadenya ee Denmark
Posted by ONA Admin	/ April 28, 2013
Waxaa 28 April 2013, lagu qabtay xafiiska Jaaliyada Somalida Ogadenia ay kuleedahay caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen shir heer sare ah ooy kasoo qayb galeen xubnaha Maamulka Jaaliyada, Masuuliin sarsare oo kamid ah madaxda oogu saraysa ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) oo kahawl gala wadankan Denmark. Sidoo kale waxa madasha shirku kadhacay siwanaagsan ooga muuqday qaybaha kala duwan ee Jaaliyada Denmark.
Shirkan maanta Copenhagen kadhay oo kusoo beegmay xilli qiimo gaar ah oogu fadhiya jaaliyada ayaa lagaga arinsaday laguna qiimeeyay waxqabadka jaaliyada iyo hirgalinta hawlihii caadiga ahaa ee hooraan loo qorsheeyay. Jaaliyada Denmark oo kamid ah horseedka Jaaliyadaha Ogadenia ee kahawlagala dunida dacalladeeda yaa kucaan baxday shaqo wanaag iyo abaabul qorshaysan oo looga bartay Jaaliyada Denmark.
Dhanka kale waxaa shirka Jaaliyada Denmark sitoos ah khadka taleefanka oogala qaybgalay Hogaanka Gaashaandhiga JWXO Naftiihure Shekh Deeq oo lawadaagay kaqaybgaleyaashii kulankan warbixin waafi ah oo kusaabsan xaalada dhabta ah ee Ogadenia kajirta iyo hawlgallada joogtada ah ee Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia (CWXO) ay sida joogtada ah ooga wadaan gudaha Ciida Ogadenia.
Wuxuu Naftiihure Sheekh Deeq sharaxaad dheer kabixiyay siyaasada guracan ee gabalkeedu dhacay ee Gumaysiga Itoobiya u,adeegsado inuu kumaamulo dalka Ogadenia iyo sida qorshihii cadawgu ufashilmay kadib markay Wayaanuhu uwakiisheen kuwii dabadhalifka oogu tayada iyo tabarta xumaa ee abid soomara carliga Ogadenia.
Naftiihure Sheekh Deeq wuxuu isagoo hadalkiisa siiwata yidhi ” Waxaa baryahan batay baxsadka & kala dhuumashada wiilashii Somaliyeed ee Cadawgu rabay inuu sixun u,adeegsado iyagoo intoodii soogaadhay Xarunta Dhexe ee CWXO ay nabadgaliyo iyo amaan buuxa heleen kuwii go,aansaday inay shacabkooda kamid noqdaana laga caawiyay siday dantooda uqabsan lahaayeen isla markaana amaankooda loosugi lahaa”.
War bixinta Naftiihure Shekh Deeq oo aad uqiimo badnayd yay siwanaagsan oogu diirsadeen dadkii madasha shirka joogay waxayna Naftiihuraha waydiiyeen su,aalo badan oo kusaabsan xogta laxidhiidha jihaadka kasocda Ogadenia taasoo uu Naftiiguruhu si faah faahsan oo qotodheer leh ooga shaafiyay dhamaan su,aalihii lawaydiiyay.
Kulankan ay Jaaliyada Somalida Ogadenia ee Denmark qabsatay yaa kusoo gaba gaboobay jawi aad uwanaagsan isla markaana ay hawlwadeenka jaaliyadu isku balan sadeen hirgalinta hawlihii la,isku afgartay in sida oogu dhakhsaha badan loo hirgaliyo.